St Maarten / St Martin, Anguilla uye St Barths vanononoka kupora mushure meIrma
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » chengetedzo » St Maarten / St Martin, Anguilla uye St Barths vanononoka kupora mushure meIrma
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • Vadivelu Comedy Dailymotion vi News • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kuchenesa kunoenderera pazvitsuwa zvese nerubatsiro rwemaFrench nemaDutch mauto kuSt Maarten / St Martin neBritish kuAnguilla. Mazana ematani emidziyo yekuvakisa akasvika nezuro muchikepe chezvikepe zvemauto. Simba nemvura zvinowanikwa zviri nani mazuva ese, pamativi ese.
Nguva yekudzoka inochengetwa kubva na9 pm kusvika 6 am kumativi ese echitsuwa.
Sonesta Maho, Ocean Point neGreat Bay, pamwe neWestin Dawn Beach vakakuvara zvakanyanya uye havafanirwe kuvhurwa mukati megore.
Vatengesi veDutch St Maarten vakumbirwa kuenda kumusangano mukuru nhasi, kusangana neHurumende, kuongorora kukuvara uye kukurukura matanho ese emangwana ekugadzirisa.
PaFrench Saint-Martin, mazhinji emahotera akange akanganisawo uye aisafanira kukwanisa kugamuchira vaenzi mukati menguva yechando ya2017-2018. Belmond La Samanna anogona kuvhurazve mushure meMay 2018. Panguva ino, hazvigoneke kunyatsojeka nekuti nyanzvi dzeinishuwarenzi dzichiri kuongorora pane saiti.
PaAnguilla, Makore mana anogona kuvhurwa mushure meMay 2018 asi Cuisinart, Belmond Cap Juluca nevamwe vangangoda nguva yakawanda kuti vadzokere. Zvekare, kukuvara kuchiri kuongororwa saiti uye zvirevo zvepamutemo zvichatevera, kubva kune yega uye yega hotera.
Kusava nechokwadi kumwechete paSt Barth, neruzivo rudiki kwazvo rwuri kupihwa nevanotengesa hotera padanho rekukuvara kwavo.
SXM airport ichiri yakavharwa kune vekutengesa nendege uye hazvisati zvanyatsojeka kana mashandiro anogona kutangazve kutanga kwaGumiguru. Air France neKLM vari kuti kupera kwaGumiguru kungangoitika asi pawebhusaiti yeAA, zvinokwanisika kubhuka ndege kubva kuSXM kutanga kwaGumiguru 10. Zvisinei, hapana kutaurirana kwepamutemo kwakaitwa uye isu tichiri kuyedza kuwana mamwe mhinduro kubva kuvakuru venhandare.
Marigot yakanganisika uye Philipsburg inogona kutanga kushanda kutanga kwaNovember 2017, iine hushoma hunyanzvi. Mitsetse yechikepe yakasarudza kukanzura kana kushanda muna 2018 pane zvakanakisa, kana mamiriro acho akaita kuti zvikwanisike.
Gustavia ichave ichishanda munguva pfupi, asiwo nedanho rakaderera.
Marigot kuenda kuSt Barth inogoneka asi igwa rakakura kwazvo, Voyager, rinoda vashanyi kuitira kuti rifambe rinofamba zuva nezuva. 80% yevatengi vayo vashanyi uye hapana vashanyi kuzvitsuwa.
Ngarava kuenda kuAnguilla haisati yatangazve.
CHIMWE CHINANGWA CHAMANGWANA:
Zviremera pamativi ese eSXM, Anguilla neSt Barth zviri kuongorora kupihwa kwekudya nemvura kuvanhu, pamwe nehurongwa hwekuvakazve.
Kucheneswa kwemarara mumigwagwa uye munzvimbo dzakapoteredza kwakabatsira kupa zviwi zvinhu zviri nani uye izvi zvakakosha kune avo vanoda kuenda nekukurumidza kupfuura zvaitarisirwa mukugadzirisa nekuona kudzoka kwevashanyi.
Zviripachena, iro rakazvimiririra rakatarisana neramangwana rakajeka nemazana emakambani anofanirwa kudzinga vashandi vawo uye dzimwe nguva kufayiridzira kubhuroka nekuda kwekushaikwa kwebhizinesi, kunyanya kumakambani anotarisana nekushanya.
Nguva yekudzoreredza inoenderana nekuti kukurumidza kuvaka kunotanga sei uye kuti imarii yakajowa nehurumende dzeFrance, Dutch neBritain kutsigira matunhu avo emhiri kwemakungwa.